काठमाडौं – प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसभित्रको भातृसंस्था नेपाल तरुण दलभित्र देखिएको विवाद उत्कर्षमा पुगेको छ ।
शनिवार तरुण दलका अध्यक्ष जितजंग बस्नेत र महासचिव भुपेन्द्रजंग शाही दुवैले एकले अर्कालाई साधारण सदस्यसमेत नरहने गरी बर्खास्त गरे ।
देउवा निकट मानिने जितजंग बस्नेतले संस्थापन इतर पक्षका महासचिव भुपेन्द्रजंग शाहीलाई पदीय मर्यादा, जिम्मेवारी र अनुशासनहिन कार्यहरू गरेको भन्दै शनिवार दिउँसो तरुण दलको कुनै पनि सदस्य नरहने गरी कारवाही गरेको भन्दै विज्ञप्ति जारी गरेका थिए ।
बस्नेतले महासचिव शाहीलाई तरुण दलको विधानको परिच्छेद १० को धारा ४४ को व्यवस्था अनुसार हटाइएको दाबी गरेका छन् ।
त्यसलगत्तै रुष्ट बनेका शाहीले पनि बस्नेतलाई एक वर्षका लागि तरुण दलको साधारण सदस्यसमेत नरहने गरी निष्कासन गरिएको भन्दै आर्को विज्ञप्ति निकाले ।
विभिन्न ४ वटा आरोप लगाउँदै शाहीले अध्यक्ष बस्नेतलाई हटाइएको बताए ।
भ्रष्टाचारविरुद्ध लक्षित कार्यक्रम रोकेको, ९५ जनाको कार्यसमिति हुनुपर्नेमा जम्मा ४ जनालाई लिएर अघि बढेको, विधानको ख्याल नराखी आफूखुसी अघि बढेको र बाढीपीडितका लागि भनेर उठाइएको लाखौँ रुपैयाँ भ्रष्टाचार गरेको जस्ता आरोप लगाउँदै महासचिव शाहीले अध्यक्ष बस्नेतलाई कारवाही गरे ।
बस्नेतले जारी गरेको विज्ञप्तिमा पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवालाई बोधार्थ गराइएको छ भने शाहीले जारी गरेको विज्ञप्तिमा पार्टी केन्द्रीय कार्यालय सानेपालाई बोधार्थ गराइएको छ ।
'दुईमहिनाभित्र महाधिवेशन गरेर नयाँ नेतृत्वलाई हस्तान्तरण गर्नुपर्छ'
अध्यक्ष बस्नेतबाट बर्खास्तगीमा परेका महासचिव शाहीले दुई महिनाभित्र पार्टीले तरुण दलको महाधिवेशन गरेर नयाँलाई तरुण दलको नेतृत्व हस्तान्तरण गर्नुपर्ने माग राखेका छन् ।
'मैले उहाँलाई अध्यक्ष मान्दै मान्दिनँ,' आइतवार लोकान्तरसँग कुरा गर्दै शाहीले भने, 'यो विषय पार्टीका नेताहरूबीच पुगिसकेको छ, उहाँहरूले नै छलफल गरेर निकास निकल्नुहुनेछ ।'
आफू निर्वाचित महासचिव भएकाले अध्यक्षले निकाल्न नसक्ने दाबी उनले गरे ।
'अध्यक्षको एउटा मनोनित सदस्यलाई निकाल्ने हैसियत हुँदैन, मलाई निकाल्ने ?' उनले प्रश्न गरे, 'मैले अनुशासन बाहिर गएर के गरें ? त्यसको जवाफ दिनु पर्दैन ?'
यस विषयमा अध्यक्ष बस्नेतले भने कुनै टिप्पणी गर्न चाहेनन् ।
'ज-जसले पालेर राखेका छन्, उनीहरूले सुधार्नुपर्छ'
नेपाली कांग्रेसका नेता चन्द्र भण्डारीले यस्तो क्रियाकलापले नेपाली युवाहरूको विश्वासमाथि कुठाराघात गरेको टिप्पणी गरे । आइतवार लोकान्तरसँग कुरा गर्दै भण्डारीले युवाहरू सुध्रिनुको विकल्प नरहेको जिकिर गरे ।
'नेपालका युवाहरूमा आशा र भरोसा जगाउने तरुण दलको पछिल्लो क्रियाकलापले विश्वासमाथि कुठाराघात गरिदिएको छ,' भण्डारीले भने, 'यस्तो सानो कुरामा पनि सानो चित्त, दृष्टिकोण र तल्लो बुझाई राख्नेहरूले भविष्यको नेपालको नेतृत्व गर्न सक्दैनन् । यिनीहरू सुध्रिनुपर्छ ।'
युवाहरूलाई नेताहरूले पालेर राख्ने प्रवृत्ति हाबी भएको आरोप भण्डारीले लगाए । 'ज-जसले युवाहरूलाई पालेर राखेको छ उनीहरूले या त सुधार्न सक्नुपर्‍यो, होइन भने छाड्नुपर्‍यो,' भण्डारीले भने, 'यसरी पार्टीलाई नै बदनाम गर्ने गरी युवाहरूले जुन कदम चालेका छन्, त्यो घातक छ ।'